Fiat Grande Punto - Auto Moto Show Katowice, Boland 2006.
Fiat Fica Italiana Automobili Torino,waa warshada baabuurta sameysa ee Talyaaniga taas oo ay xarunteedu tahay Torino.
FIAT, Talyaaniga: Fabbrica Italiana Automobile Torino, laydh Factory Automobiles Factory ', Turin') waa shirkad talyaani ah, oo ka tirsan shirkadda FCA Italy SpA, oo ah qayb ka mid ah Fiat Chrysler Automobiles (horay Fiat SpA). Fiat Automobiles ayaa la aasaasay bishii Janaayo 2007 markii Fiat ay dib u habeeshay ganacsigeeda gawaarida, waxayna taariikhda taariikhda dib u soo celisay ilaa 1899 markii markii ugu horreysay ee Fiat baabuurta Fiat 4 HP lagu soo saaro.
Fiat Automobiles waa shirkadda ugu weyn ee baabuurta talyaaniga ah. Intii uu socday taariikhda qarniyadii hore, waxa uu ahaa midka ugu weyn ee baabuurta gawaarida ee Yurub iyo kan saddexaad ee caalamka ka dib markii General Motors iyo Ford muddo ka badan labaatan sano, illaa iyo markii qalalaasaha baabuurta ee dhamaadkii 1980-kii. Sannadkii 2013, Fiat S.p.A. wuxuu ahaa kii labaad ee ugu weynaa ee yurubiyanka ah oo ay soo saarto tan iyo sannadkii toddobaad ee adduunka, halka haatan FCA ay tahay caalamka siddeedaad ee ugu weyn ee baabuurta.
Sanadkii 1970, Fiat Automobiles waxay shaqaalaysay in ka badan 100,000 oo Talyaani ah markii ay soo saartay tiradii ugu badneyd, 1.4 milyan oo gawaarida dalkaas. Laga soo bilaabo 2002, waxay dhistay in ka badan 1 milyan oo gawaarida lix dhirta oo Talyaani ah iyo waddanka oo ka badan saddex meelood meel ka mid ah dakhliga shirkadda. Fiat ayaa sidoo kale soo saartay mashiinnada tareenada, gaadiidka milatariga, tareenada beeraha, diyaaradaha, iyo hubka sida Fiat-Revelli Modello 1914.
Gawaarida nooca Fiat-waxaa lagu dhisay meelo badan oo adduunka ah. Dalka Talyaaniga, ugu weyn ee wax soo saarka waa Brazil, halkaasoo magaca Fiat uu yahay hoggaamiyaha suuqa. Kooxdu waxay sidoo kale leedahay warshado ku yaalla Argentina, Boland iyo Mexico (halkaasoo baabuurta Fiat-ga lagu soo saaro dhirta ay leedahay oo ay maamusho FCA US si loo dhoofiyo Maraykanka, Brazil, Talyaaniga iyo suuqyada kale) iyo taariikhda dheer ee shahaadada ruqsadaha alaabooyinka dalalka kale.
Fiat Automobiles waxay heshay abaalmarino badan oo caalami ah oo loogu talagalay gawaaridooda, oo ay ku jiraan sagaal gaari oo Yurub ah, oo ah badi shirkadaha kale, waxayna ku jirtey marar badan oo ah heerka ugu hooseeya ee CO2 oo lagu iibiyo baabuurta lagu iibiyo Yurub.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiat&oldid=221160"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 25 Oktoobar 2021, marka ee eheed 06:55.